Yakachipa Mupfudze Mechanical Yakarerekera Solid-Liquid Separator Machine Vanopa uye Fekitori | YiZheng
Chii chinonzi Yakarembera Sieving Solid-liquid Separator?
Imidziyo yekudzivirira zvakatipoteredza yemarara tsvina yemanyowa. Inogona kupatsanura iyo yakasviba uye yakasviba tsvina kubva kuzvipfuyo marara kuva emvura organic fetiraiza uye yakasimba organic fetiraiza. Iyo fetiraiza yemvura inogadzirwa inogona kushandiswa mukushandisa goho mushure mekuvira, uye yakasimba organic fetiraiza inogona kushandiswa munzvimbo yekushayikwa kwefetiraiza iyo inogona kuvandudza chimiro chevhu. Panguva imwecheteyo, zvakare inogona kugadzirwa fetiraiza yakasanganiswa fetiraiza. Pombi yemvura inotsigira inoshandiswa kutumira manyowa emvura ekutanga kupatsanura, uye chinhu chakasimba (mupfudze wakaoma) unodhonzwa uye kupatsanurwa kuburikidza neiyo axis yakaiswa muchiratidziri, uye mvura irikubuda kunze kwenzvimbo kuburikidza nesefa.
Maumbirwo eIyo Inofarira Sieve Rudzi Solid-mvura Separator
Iyo Yakarerekera Sieving Solid-mvura Separator inonyanya kugadzirwa nesefa, yekunaya winch uye yemhepo blade, iyo inogadzirwa yemhando yepamusoro 304 simbi isina simbi uye chiwanikwa mushure mekuita kwakakosha. Iyo ine yakanaka ngura kuramba uye kupfeka kuramba. Iyo ine 2-3 nguva yekusimudza sevhisi ichienzaniswa nezvakafanana zvigadzirwa.
Zvimiro zveYakatemerwa Sieving Solid-mvura Separator
Iyo yekumisikidza basa reanorerekera nesefa yakasimba-mvura yekuparadzanisa yakakwana uye yakanangwa. Iyo yese muchina dhizaini inosanganisa iyo mupfudze kupomha system, vibration system, extrusion system uye otomatiki kufuriza system, iyo inovandudza iyo yekurapa kugona uye kurapwa maitiro.
1. Chizvarwa chitsva chekurasa marara ekuchengetedza michina.
2. Nyatso kurapa marara emanyowa kubva kuzvipfuyo nekuhuku kumapurazi kune yakasimba-mvura yekuparadzanisa.
Zvakanakira Kupindirana Sieving Solid-mvura Separator
1.Iine basa rekugadzirisa nekusefa zvidimbu zvidiki kutanga, uye rinobatanidza akawanda mabasa akadai sekutapurirana, kudzvanya, kupera mvura uye kubviswa kwejecha kugadzirisa matambudziko emarara emidziyo yekumhanyisa uye yekuvhara mweya
2.Iyo yekuparadzanisa mwero wekuyangarara, wakasimudzwa chinhu uye masese mumarara zvinopfuura 95%, uye izvo zvakaomarara zvemarara zvakapfuura 35%.
Iyo ine otomatiki emvura mwero kudzora basa, iyo inochengetedza inopfuura 50% yesimba rekushandisa pane yakafanana michina, yakaderera mashandiro emutengo.
4.Chikamu chemidziyo inosangana neyekugadzirisa svikiro chakagadzirwa nesimbi isina simbi yepamusoro uye inofarirwa nekunhonga.
Yakarerekera Sieving Solid-liquid Separator Video Display
Yakarerekera Sieving Solid-liquid Separator Model Selection
Izvo zvakakosha parameter zvinotevera:
Pashure: Kwakamira Fetiraiza Batching Machine
Zvadaro: Organic fetiraiza yekugadzira mutsara